Otu esi etinye Google Chrome na CentOS 9 Stream - LinuxCapable
Otu esi etinye Google Chrome na CentOS 9 Stream
Sunday, December 12, 2021 Wednesday, December 1, 2021 by Jọshụa James
Ọnọdụ – Wepu njikwa ndenye aha DNF
Bubata Google Chrome Stable na ma ọ bụ Beta, ebe nchekwa anaghị akwụsi ike
Google Chrome bụ sọftụwia Internet Explorer kacha eji n'ụwa, yana mmelite na nso nso a na 2021 na Chrome bụ ihe nchọgharị bụ isi nke ndị ọrụ ịntanetị karịrị ijeri 2.65. Agbanyeghị, dịka ị ga-ama, mgbe ị wụnyechara CentOS 9 Stream, naanị Mozilla Firefox ka etinyere ya na nkesa mana ọ dabara nke ọma, ịwụnye Google Chrome bụ ọrụ kwụ ọtọ.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye Google Chrome n'ụzọ atọ dị iche iche n'ụdị kwụsiri ike, beta ma ọ bụ nke anaghị akwụsi ike na CentOS 9 Stream.
OS akwadoro: Ọ bụla dị ugbu a CentOS iyi
Melite gi CentOS iyi sistemụ arụmọrụ iji hụ na ngwugwu niile dị kwalitere ruo ugbu a:
Ka ịtọlite ​​akaụntụ sudo dị adị ma ọ bụ ọhụrụ, gaa na nkuzi anyị na na-agbakwunye onye ọrụ na Sudoers na CentOS Stream.
Ugbu a, onye njikwa ngwa mgbakwunye CentOS Stream 9 DNF nwere ike bute nsogbu na njikwa ndenye aha. Ogologo oge, a ga-ewepụ nke a na ISO n'ọdịnihu dịka CentOS Stream bụ n'efu maka ojiji, mana ị ga-achọ iji aka wepụ ya ugbu a, ma ọ bụ na ị gaghị aga n'ihu na nkuzi a.
Ọmụmaatụ mmepụta njehie:
N'ọnụ ọnụ gị, mebie iwu a.
Dịka ekwuru n'elu, ewepụla mkpọchi niile dabere na ndenye aha.
Maka sistemụ Linux dabere na CentOS Stream, ngalaba nchekwa atọ ugbu a kwesịrị ka ebudata ya n'otu n'otu ka etinyere na sistemụ gị. Ozugbo etinyere ya, a na-agbakwunye ha na-akpaghị aka na repolist gị, yabụ na ị gaghị adị mkpa ka ibudata ha ọzọ ka imelite Chrome n'ọdịnihu.
Ka ibudata Google Chrome Stable Repository (A kwadoro):
Ka ibudata Google Chrome Beta Repository:
Ka ibudata ebe nchekwa Google Chrome na-adịghị akwụ ụgwọ (Dev):
Ugbu a ị nwere ike ịwụnye ngwugwu RPM site na iji njikwa ngwugwu DNF ma ọ bụ YUM, a na-atụ aro ya mgbe niile iji DNF dị ka ọkọlọtọ ọhụrụ n'ọdịnihu.
Mara, a ga-akpali gị ibubata igodo GPG. Ụdị "Y" iji mechaa nrụnye.
Ka ịwụnye Google Chrome Unstable (Dev):
The oge mbụ ị mepee Google Chrome na CentOS Stream 9, mmapụta ndị a ga-ekele gị:
Ekele, ị tinyela Google Chrome na sistemụ arụmọrụ CentOS 9 Stream gị.
Ụzọ ọhụrụ kachasị mma ga-abụ imelite ngwungwu sistemụ gị niile site na iji iwu na-esonụ.
Nke a bụ iwu niile n'ime otu.
How to Install Google Chrome Stable, Beta, or…
Wụnye Google Chrome na elementrị OS 6.0/6.1
Categories CentOS iyi Tags CentOS Stream 9, Nchọgharị Google Chrome Mail igodo
Otu esi etinye onye ọrụ na Sudoers na CentOS Stream
Otu esi etinye PyCharm IDE na Fedora 35